कारागारमा घरेलु सामग्री उत्पादन कक्ष – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
कारागारमा घरेलु सामग्री उत्पादन कक्ष
२०७१ फाल्गुन १७, आईतवार ०१:४० गते
भरतपुर । सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल आँपटारीको समन्वयमा भरतपुर कारागारमा रहेका बन्दीहरुका लागि घरेलु सामग्री उत्पादन गर्न छुट्टै कक्ष बनाइएको छ ।
कारागार परिसरमा रहेको कक्षकोे शनिबार चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. मानबहादुर विकेले उद्घाटन गरे । प्रजिअ डा. विकेले बोल्दै कारागारभित्र रहेका बन्दीहरुलाई अब घरेलु सामानहरु निर्माण गर्न सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
‘कारागार भित्रै साँघुरो अवस्थामा घरेलु सामग्री बनाउनुपर्ने अवस्था थियो अब त्यो अन्त हुने भएको छ”, उनले भने ।
कक्ष निर्माणका लागि ७० हजार रूपैयाँ खर्च लागेको छ । विभिन्न दाताहरुको सहयोग लिएर सीमा सुरक्षा कार्यालयले सो कक्ष निर्माण गरेको कार्यालयका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरिक्षक शम्भुबाहादुर उप्रेतीले बताए ।
चितवनमा स्वाइन फ्लुका बिरामी देखा पर्न थालेपछि भरतपुर कारागारले विशेष सतर्कता अपनाएको छ । बाहिरबाट कारागारमा भेट्न आउने आफन्तलाई कारागारले एक मिटर टाडैबाट भेटघाट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
‘रूघा खोकी लागेका मानिसलाई अहिले कारागारका बन्दीहरुलाई भेटघाट गर्न बन्द गरिएको छ’, कारागारका हेल्थ असिष्टेण्ड केशव चापागार्इंले भने, ‘अन्य मानिसहरुलाई पनि एक मिटर टाढैबाट भेटघाट गर्न मिल्ने गरी भेटघाटको व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ कारागारभित्र रहेका बन्दीहरुको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरेर नै यो कडाइँ गरिएको चापागाइँले बताए ।
झण्डै डेढ सय क्षमताको भरतपुर कारागारमा अहिले ५२० बन्दी छन् । कुनै पनि एकमा स्वाइन फ्लु देखियो भने अन्य बन्दीहरुमासमेत सहजै सर्न सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर नै सतर्कता अपनाइएको कारागार व्यवस्थापनले जनाएको छ । बाहिरबाट भेट्न आएका आफन्त र बन्दीबीच निश्चित दूरी कायम गराउनका लागि कारागारमा डोरी लगाएर टाडै राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराएकामध्ये चारजनालाई स्वाइन फ्लु भेटिएपछि चितवनमा यसको उच्च सतर्कता अपनाइएको हो । भरतपुर अस्पतालमा भेटिएका चारमध्ये तीन चितवनकै बासिन्दा हुन् । त्यसैगरी कारागारमा बन्दी अवस्थामा रहेका महिलाहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । डाक्टर श्रीमती संघको आयोजनामा ४५ जना महिला बन्दीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो ।